Mune dzimwe nzvimbo mvura iri kunaya iri kuvhara migwagwa
Sangano reZimbabwe Red Cross Society rinoti rakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vawirwa nedambudziko remafashamu munyika.
Boka iri rinoti raona zvakakodzera kuti richenjedze vanhu pamusoro pemafashamu, zvikuru mumatunhu ari kumabvazuva kwenyika nedzimwe nzvimbo dzagara dzichisangana nematambudziko aya.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Red Cross Society, kana kuti director of operations, VaKarikoga Kutadzaushe, vanoti sangano ravo rinoshanda neboka reCivil Protection Unit mukubatsira vanenge vawirwa nematambudziko.
Vanoti sangano ravo rinobatsira nezvinhu zvakaita sematende kune vanenge varasikirwa nedzimba dzavo, pamwe nezvimwewo zvinodiwa munguva yematambudziko akadai.
Muguta reHwange, mudunhu reMatabeleland North, mazana evagari anonzi ari kubatsirwa kubva munzvimbo iyi zvichitevera mafashamu anonzi aparadza zvivakwa nekukanganisa magariro evanhu.
Hurukuro naVaKarikoga Kutadzaushe